Ogaden News Agency (ONA) – OYSU/South africa oo Qabatay Shirweyne aan loo kala hadhin oo Gudoomiye JWXO uu Kala Qeyb Galay
OYSU/South africa oo Qabatay Shirweyne aan loo kala hadhin oo Gudoomiye JWXO uu Kala Qeyb Galay
Posted by ONA Admin	/ October 16, 2012
Ururka Dhalinyarada iyo Ardayda Somalida Ogadeniya ee marka lasooo gaabiyo looyaqano OYSU Ayaa wadanka South Africa gaar ahaan gobolka (PE) waxay ku qabteen shirweyne aanay u kala hadhin bulshada qeybaheeda kala duwan. Shirkan ayaa furmay 15.10.2012 Abaarihii 8:00 duhurnimo waxan shirka si heer sara ah u daadihinayey madaxa Arimaha Bulshada OYSU ee dalka South Africa Halgame Abdirahaman Siciid Daahir-Gumaysi Diid.
Sidii caadada aheyd waxaa lagu bilaabay shirka wacadi_diini ah oo uu soo jeediyey Sheikh Mahamed Rabi. Sheekha ayaaa ku dheeraaday cimiriga ruuxa bini-Adam ka ah inuu uga faa’ideesto gudashada cibadada, dhalinyaraduna xasuusnaadan cabsida Alle iyo waajibaadka Eebe. Ka dib, waxaa lagu soo dhaweyey Cade Ahmed Sulub oo warbixin meelo badan taabanya ka soo jeediyey shirka.
Jawiga shirka ayaa mar Qudha Isbadalay markuu Khadka TELEFONKA uu soo galay Gudoomiyaha Jabhadda Wadaniga Xoreynta Ogadenya Admineral Mahamed Cumar Osman. Gudoomiyaha ayaa wuxu ku bilaabay hadalkiisii salan diiran oo uu soo jeediyey shirka, salaantaa ka dib ayuu Gudoomiyaha wuxuu siiyay shirka warbixin guud oo meeloo badan taabanaysay. Warbixinta Gudoomiyaha oo aad loogu diirsadday ayaa meelaha ay taabanaysay waxaa ugu badnaa xaaladda gudaha ogadeniya iyo warbixinta siyaasiga ah ee guud ahaan Geeska Afrika. Gudoomiyaha ayaa u sheegay shirka In uu biloowday shirkii wada hadalka qaybtiisii 2aad kana furmayNairobi. Gudoomiyaha ayaa dhageestay Gabay qiiro badana oo uu soo jeediyey Abwaan Khadar Colaad oo ay kamid ahaayeen Ereyadan;
– Hadaynaan Kujirin Jiida Hore ee gumacu Jawleeni
– Jalka bixiya Joornaalka qora Jaajarkana Dhiiba
– UN_ta jaan iyo Qurbuhu yeena idin jiidan
– Jabanaha Khadhaadh iyo Hurdadu yeena Idin jiidan
– Jawiga iyo dhismaha jaalada ah yeena idin jiidan
– Jidkan Quruxuda_san iyo laamiyadu yeena Idin jiidan
– Jihaaday Xubnaha JWXO waa kuwo Karaamo lehe.
Gudoomiyaha Ayaa si_gaar ah ugu mahadceliyey Abwaan Khadar Colad. Waxaa Gudoomiyaha sidoo kale goobta laga waydiiyey sua’alo muhiim ah oo meelo badan taabanaya oo dhamaan uu ka jawabay si waafi ah. ugu dambayntii Gudoomiyaha iyo Shirweynaha jaaliyadda ayaa isla Qaatay in la sii xoojiyon Halganka ogadeniya.
Waxaa sidoo kale Shirka ka hadalay Odayaal Dhaqameedyo caan ka ah Ogadeniya. Waxaa ugu dambayntii lagu soo gaba-gabeeyay shirweynaha ay soo Qaban Qabiyeen Ururka OYSU si farxad iyo guul ay ku dheehan tahay iyadoo lagu dardarmay dadaal iyo waxa qabada dheeraad ah si loo xaqiijiyo himilooyinka ay higsanayaan Shacabka Ogadenia ee ah Xorriyadonka
Kalsoco Khudbadii gudoomiyaha iyo Gabayo IleysTV.